भोजसँग साटियो नेपाली नागरिकताः वडा अध्यक्ष नै भारतीय ! – The Public Today
भोजसँग साटियो नेपाली नागरिकताः वडा अध्यक्ष नै भारतीय !
द पब्लिक टुडे असोज १५, २०७७ १०:२८ am
२०६३ सालमा गाउँगाउँमा नागरिकता बाँड्ने टोली परिचालन भयो । नागरिकता लिन मानिसहरु कमिलाको ताँति नै लाग्यो । कोही देशबाट घर फर्किए भने कोही विदेशबाट । भिडमा पसेर नेपालीले मात्रै होइन्, भारतीय नागरिकले पनि नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिए । यस्तै भिडमा पस्नेहरु मध्ये थिए, एक सितामढी मनपौरका एक भारतीय नागरिक । जसले स्थानीय राजनीतिक दललाई मासु–रक्सीको भोज खुवाएर नेपाली नागरिकता हात पारेका थिए ।
महोत्तरीको तत्कालिन गा.वि.स बिजलपुरा–४ बस्ने अकुवान टोलका ती भारतीय नागरिक ज्वाँई थिए । ज्वाँइलाई नागरिकता दिन राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु साँक्षी बसे भने, नेपालमा रहका भारतीयका नातागोताले सनाखत गरे । भारतीयलाई नेपाली नागरिक बनाउन कसैले आफ्नै छोरा, नाती, काका बनाएर नागरिकता दिलाएका थुपै्र घटनाहरु छन् ।
नेपाली चेलीसंग विवाह गरेका ती भारतीय युवक २०५८ साल तिरबाट ससुराली गाउँमा बस्न थाले । नेपाली चेलीले पहिलो सन्तान छोरी भारतस्थित आप्mनै ससुरालीमा जन्माएकी थिइन् । लामो समयसम्म अर्को सन्तान नजन्मिएपछि श्रीमती लिएर ती भारतीय छोरो पाउने सपना बोकेर विजलपुरास्थित ससुराली आएका थिए ।
बिजलपुरा–२ चल्कीस्थित रामजानकी गुठ्ठीको जग्गामा घर बनाएर बस्न थाले । भारतीय युवकले परिवार चलाउन कहिले खाजा पसल चलाए भने कहिले मजदुरी गरे ।
२०६३ सालमा नागरिकता टोली पुग्दासम्म उनी गाउँभरी नै चिरपरिचित भइसकेका थिए । उनले नेपाली नागरिक बन्न फर्म भरे । ‘भोज खुवाउनु पर्छ, अनि नागरिकता बन्छ’ भन्दै राजनीतिक दलका एक नेताले भारतीय युवकलाई भने । ती भारतीय युवकले भोज खुवाउने शर्त पुरा गरेपछि कर्मचारी र दलका प्रतिनिधिहरुसंग ती नेताले सेटिङ्ग मिलाए । अनि फर्ममा स्थानीय तत्कालिन सात दलका प्रतिनिधिले ‘भारतीय युवक नेपालमै जन्मिएको’ सहरजमिन कागजमा हस्ताक्षर गरिदिए ।
नागरिकता टोलीले निसंकोच भारतीयलाई नागकिता दिए । केही बर्षपछि ती दम्पत्तिको दोस्रो सन्तानको रुपमा छोरो जन्मियो । त्यसपछि भारतीय युवकले गुठ्ठीमा बनाएको घर बेचे । साइकलमा सरसमान लोड गरि छोराछोरी र श्रीमतीको साथमा नेपाली नागरिकता लिएर आफ्नै जन्मभूमी भारत फर्किए ।
वडा अध्यक्ष नै भारतीय
महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका–५ का वडा अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी भारतीय नागरिक रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा उजुरी परेको छ । उनी विरुद्ध ६ फाल्गुण २०७६ मा उजुरी परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका मुद्दा फाँटका खरिदार सुधिर साहले जनाए । उनका अनुसार उजुरी परे लगतै फाल्गुण ८ गते उनको नाममा पत्र काटिएको थियो । वडा अध्यक्ष चौधरी भारतीय नागरिक रहेको प्रमाणसहित रामगोपालपुर–८ थलहीका हरिश्चन्द्र ठाकुरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । नागरिकता सम्बन्धी उजुरीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान गर्दैछ ।
लकडाउनले अनुसाधन प्रभावित भएको छ । ‘अवैध रुपमा नागरिकता लिएको ठहर भए नागरिकता खारिज, कैद, जरिवाना सहितको कारवाही हुन्छ,’ महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले भने ।
२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वातन्त्र उमेदवारी दिएका जितेन्द्र वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उनी भारतको सितामढी जिल्लाको सिरसिया बजारको बासिन्दा रहेको प्रमाण फेला परेको छ । उजुरीकर्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेको उजुरीमा भारतीय निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा चौधरीको फोटो सहितको नाम रहेको तथ्य पनि पेश गरेको छ ।
भारतीय मतदाता नामावलीमा वडा अध्यक्षको नाम जितेन्द्र चौधरी र उनको वुवाको नाम हिरा चौधरी उल्लेख छ भने नेपाली नागरिकतामा वडा अध्यक्षको वुवाको नाम हिराबाट परिवर्तन गरेर अनिल चौधरी उल्लेख छ । उनको वुवा र वडा अध्यक्षले सन् २०१९ मा भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा मतदान समेत गरेका उजुरीकर्ताको भनाई छ । यता वडा अध्यक्षले आफू नेपाली नागरिक रहेको दावी गरेका छन् ।
नाता फेरेर नागरिकता !
नेपाल–भारत बीच रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । त्रेताकालमै भगवान राम–सीताको विवाहले कायम गरेको नेपाल र भारत नाताकुटुम्भको सम्बन्ध अहिले पनि सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक रुपमा अझै कायम रहेको छ । यहि सम्बन्धलाई दुरुपयोग गर्नेहरु पनि धेरै छन् । आफ्ना भारतीय ज्वाँईलाई छोरा बनाएर नेपाली नागरिकता दिलाउनेहरु पनि छन् । जसले गर्दा भारतीहरु रातारात नेपाली भएका छन् । भारतमा पनि नेता चुन्छन्, नेपालमा पनि त्यो अधिकार प्रयोग गर्छन् ।
२ पुष २०७५ मा महोत्तरीको ईलाका प्रशासन कार्यालय गौशालाबाट भारतीय नागरिकलाई आफ्नो छोरा भनेर नागरिकता दिलाउन लागिएको अवस्थामा प्रहरीले सासू र ज्वाँईलाई नियन्त्रणमा लिए । औरही नगरपालिका–३ बस्ने ३९ वर्षीया सिवो देवीले आफ्ना ज्वाइँ भारत विहारको मुजफ्फरपुरको शिवदासपुर दौरा असली पञ्चायत–६ बस्ने २१ वर्षीय राजपाल सहनीलाई छोरो भन्दै नागरिकता दिलाउन सनाख्त गरेकी थिइन् ।
सासू सिवोले ज्वाइँ राजपाललाई आफ्नो छोरा सरोज सहनी बनाई नागरिकता दिलाउनका लागि झूटो विवरण पेश गरेकी थिइन् । प्रशासनले प्रमाणमा शंका गरेपछि अनुसान्धान थालेका थिए । छानविनको क्रममा राजपालको साथबाट भारतीय आधारकार्ड र सवारी चालक अनुमतिपत्र बरामद गरेको थियो । त्यसैगरि धनुषामा पनि झुटो विवरण पेशगरी नागरिकता बनाउन खोज्ने ज्वाइँ–ससुरा ७ महिना अघि पक्राउ परे ।
झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा धनुषाधाम नगरपालिका–२ का जीतनारायण यादवले भारतीय ज्वाइँलाई छोरा भन्दै नागरिकता बनाउन पुगेका थिए । नागरिकता बनाउने बेलामा कर्मचारीलाई कागजातमा शंका लागेपछि जीतनारायण र उनका ज्वाइँ भारत विहार राज्यको मुजप्mरपुरका सुनिलकुमार यादवलाई पक्राउ गरेको थियो । नागरिकता बनाउनका लागि धनुषाधाम नगरपालिका–२ का वडाध्यक्षले सिफारिस समेत गरेका थिए । त्यही सिफारिस लिएर उनीहरू नागरिकता बनाउन खोजेका थिए । स्रोतका अनुसार वडाध्यक्षलाई उनीहरूले घुस खुवाएर नागरिकताका लागि सिफारिस लिएका थिए ।
नागरिकताका नक्कली बुवा
भरतीयले नेपाली नागरिकता लिन नेपालमा रहेका नातागोताबीचको रिस्ता(सम्बन्ध) फेर्ने गरेका छन् । २५ असार ०७१ म महोत्तरीमा रहँदै आएका मामालाई बुवा बनाएर नागरिकता लिदैं गर्दा भारतीय नागरिक पक्राउ परे ।
भारत विहार राज्यको मधुवनी जिल्लाको मधवापुर थानाअन्तर्गत रामपुर बस्ने राजाराम ठाकुरले महोत्तरीको तत्कालिन बथनाहा गा.वि.स.–४ बस्ने मामा दशरथ ठाकुरलाई नक्कली बुबा बनाई २०४४ फागुन २५ गते टोलीमा वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए ।
ठाकुर आफ्नै बाबु रामप्रित ठाकुरसँगै महोत्तरीकै पर्सा पतैली–३ मा घर बनाई बसोबास गर्दै आएका छन् । पर्सा पतैली–१ बस्ने सुजीतकुमार चौधरीले २०७० मंसिर २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको जाहेरीका आधारमा ठाकुरलाई पक्राउ गरी नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा चलाइएको थियो ।
नागरिकता रेलको टिकट हो र ?
भारतीयले नेपाली नागरिकता लिने क्रम २०६३ सालमा बढ्यो । गाउँ–गाउँमा जब नागरिकता टोली पुग्यो, त्यसपछि नेपालमा रहँदै आएका भारतीयहरुले नक्कली नाता खडा गर्दै नेपाली नागरिकता हात पारे ।
महोत्तरीका एक राजनीतिकर्मीका अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्र नजिकैको भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिए । नेपालमा व्यवसाय गर्दै आएका, ससुराली भएका, तस्करी गर्ने ब्लेकिया, अपराधी गिरोहले नेपालमा रहेका आफ्ना आफ्न्ताहरुलाई नक्कली बुवा, आमा नागरिकता लिए ।
विगतमा नेपाली नागरिकहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठेरो परिरहेको अवस्थालाई महसूस गरी प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले नेपाल राज्यभित्रको नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने कदम चाल्यो । त्यस अनुरुप २०६३ साल कार्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति र तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका लागि प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले नागरिकता ऐन, २०६३ बनाएयो ।
यो ऐन नागरिकता पाउन नसेका नेपाली नागरिकताका लागि बनाइएको थियो । तर, मधेशका जिल्लाहरुमा भारतीयलाई तीनका नेपालमा बस्ने आफन्तजनले नेपाली हो भन्दै छोरो, नाती, बुवाको नक्कली नाता कायम गर्दै भारतीयलाई नागरिकता दिलाइयो । नागरिकता बाँड्दा घुसपैठ भएको प्रशासनले पत्तै पाएन । कतै आर्थिक लेनदेनमा त कतै प्रलोभनमा परे राजनीतिक दल तथा प्रशासनले छानविन नगरि नागरिकता बाँड्दा नेपाली नागरिकता भारतीयको हातमा पुग्यो ।
नागरिकता वितरणमा सरकारका प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक सयन्त्र चुक्दा भारतीयको हातमा नेपाली नागरिकता परेको राजनितिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभले टिप्पणी गरेका छन् ।
‘भारतीयले नेपाली नागरिकता लियो, त कसले दियो ? नागरिकता दिने मान्छेको खोजी हुनु पर्छ कि पर्दैन,’ उनले भने, ‘नागरिकता बस र रेलको टिकट हो र ? जसलाई पनि दिन र दिन मिल्ने ? को थिए त्यस्ता अपराधी ? जसले भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिए ?’ बदमासी गरेकाहरुलाई अनुसन्धान गरेर कारवाही गरिनु पर्छ । तर, त्यसको आडमा मधेशवासीलाई वैचारिक रुपले होच्चाउनु, अक्रमण गर्नु उपयुक्त नहुने उनले बताए ।
विदेशीले नागरिकता लिए यस्तो हुन्छ कारवाही
नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ (१) मा विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी नागरिकता लिने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । त्यस्तै दफा २१ कै उपदफा २ मा नागरिकता दिलाउन सनाखत वा सिफारिस गर्नेलाई ६ महिना देखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।
१ ओलीले १० बुँदे नमाने पार्टीलाई क्षति हुने रावल र भुसालको चेतावनी
२ दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा सीके राउतका १३ कार्यकर्ता प्रहरी नियन्त्रणमा
३ महोत्तरी : घर भत्किँदा लाखौंको क्षति
४ बाढी पीडितलाई नगद सहयोग
५ ३८ घण्टापछि पुनः सञ्चालनमा दुहबी सबस्टेशन
६ रथबाट लडेर १० वर्षिय बालकको ज्यान गयो
७ अनन्या पाण्डेको घरमा एनसीबीको छापा
८ खानेपानी संस्थानका प्रमुखलाई हिलो दलेर जनकपुर बजार घुमाइयो